I-Aperi Showcases I-New Innovations ku-Virtualization yeqiniso kanye ne-Container-based Live IP Media Workflows e-IBC2019 - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA UVULA
Ikhaya » Izindaba » I-Aperi Showcases Latest Innovations ku-Virtualization Yeqiniso kanye ne-Container-based Live IP Media Workflows e-IBC2019
I-Aperi Showcases Latest Innovations ku-Virtualization Yeqiniso kanye ne-Container-based Live IP Media Workflows e-IBC2019
I-Camarillo, CA, September 9, 2019 - Ngemuva kwakamuva kokuthola ngaphezulu kwe- $ 10 million (i-USD) ngemali, iphayona lokukhiqizwa kwemidiya bukhoma Aperi izokhombisa ubuchwepheshe bayo yakamuva obuchazwe ngokusetshenziswa kwe-IP media media ukuqhutshwa kwe-IBC 2019 (ukuma 2.C30). Lokhu kufaka phakathi izixazululo zeqiniso ze-IP Virtualised IP Media Virge eziqhutshwa isuselwa esitsheni saso I-V-Stack® I-Software Hypervisor yemisebenzi ye-Ultra-low latency media nemisebenzi emisha yokusakaza bukhoma etholakala ku App App Store.
I-Aperi izokwethula ukuboniswa okubukhoma, okungokoqobo emhlabeni okubonisa ubuhle bokubona okuyiqiniso okusekwe esitsheni kokugeleza kwemidiya bukhoma. Izivakashi zingabona nemiboniso ebukhoma eqokomisa ukugeleza kokugeleza kwe-IP okuthuthukile, okwethusayo nokungena ngemvume, kuhlanganiswe neqoqo eligcwele lokuqina nokuphepha - iphuzu elisemqoka lokugxila ku-Aperi embukisweni. I-Aperi izophinda ibe nesethi ephelele yokucindezela ama-codecs akhonjiswayo, kufaka phakathi i-4K TICO, i-JPEG 2000 ne-H.264.
"Noma ngabe ezindaweni zemidlalo, ngaphakathi kwama-OB ukuvunyelwa kwemicimbi yezemidlalo bukhoma noma ukuhlinzeka ngezixazululo zokukhiqiza ezikude ngokuhamba okuphezulu kwezinsizakalo zezindaba ezisezingeni eliphezulu kumanethiwekhi, i-Aperi inikela ngengxenyekazi evumelana nezimo embonini," kusho umphathi we-Aperi uJoop Janssen. "Ngamalayisense entantayo, afakwe emanzini, sinika amandla abahlinzeki bezinsizakalo ukukala futhi bahlukanise kabusha izinsiza ezifunwayo, cishe ngokushesha nangengxenyana yezindleko zezisombululo zendabuko."
E-IBC2019, i-Aperi izophinda yethule i-DVB-ASI noma i-SDI yokusebenza kahle kwe-compact eyakhelwe phezulu esezingeni eliphezulu ehambisa ukuguqulelwa okususelwa kumazinga kwe-ST 2022-2 kanye ne-ST 2022-6 egeleza ngendlela ethinta imizwa, ukuvumela okuqukethwe ukuthi kudlale ngqo ekuhambeni komsebenzi okusekwe ku-IP.
I-Aperi izophinde ikhombise ukuhunyushwa kwamakheli we-Network adidiyelwe ngokugcwele (i-NAT) ne-firewalling (noma iphoyisa) kubona bobabili SMPTE 2022 futhi SMPTE I-2110 IP igeleza ngokulawulwa yi-orchestrator ehola nabahlinzeki be-NMS besebenzisa ama-API avulekile, anamandla futhi anembile wama-API.
Ngama-Aperi, abahlinzeki bensizakalo, abanamalungelo abasakazi kanye nabasakazo bangazijwayeza masishintshe izimo zemakethe futhi basebenze ngokushesha, ngempumelelo, futhi ngezinga lokukhiqizwa kude okude kakhulu futhi okudala kakhulu. Inhlanganisela ye-Aperi yokubona ngokweqiniso kanye nendlela yayo esekwe ngokuqinile esekwe kwi-V-Stack media esezingeni eliphezulu inikezela ukucutshungulwa kwemidiya ephansi kulawo womabili amanethiwekhi asemqoka nasendaweni.
Ababekhona kwi-IBC bangabona i-IP yemvelo esekwe kwisoftware nobubanzi obugcwele bemisebenzi yemidiya ebukhoma endaweni yokuma i-2.C30.
Ubuchwepheshe obuvulekile bokuguqula u-Aperi obuchazwe yisoftware buchazwa kabusha kwezemidlalo bukhoma, ukuzijabulisa nezindaba zezindaba ezigabeni ezinkulu zomhlaba.
Nge-IPeri centric IP-centric kanye ne-FPGA esetshenziselwa abezindaba, abahlinzeki bezinsizakalo, abanikazi bokuqukethwe, abanikazi bamalungelo kanye nabasakazo bangakwazi ukukhiqiza okuqukethwe okunekhwalithi ephezulu ngokushesha, nge-latency ephansi kakhulu futhi ngezinga lokukhiqizwa kude okuphezulu kakhulu futhi okudala kakhulu.
Ukuze ufunde kabanzi nge-Aperi, sicela uvakashele www.apericorp.com bese ulandela @apericorp ku-Twitter.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CES2017 I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo	2019-09-10
Ngaphambilini: I-Core Post Ihambisa i-Sky One's Brassic ku-HDR nge-DaVinci Resolve
Olandelayo: Amasistimu wevidiyo we-TAG Akha Ngokumaketha Okuhola Emakethe, Ukuqapha kanye Nethala Lokulawula Okwenziwayo Ngokungeza Ukuxhaswa Kwezicelo Ezengeziwe kanye Nokunikeza Izici Ezihlosiwe Ezihlosiwe